I-Kirin 970, iprosesa yokuqala eneyunithi yeArtificial Intelligence | Iindaba zeGajethi
I-Kirin 970, iprosesa yokuqala eneyunithi yeArtificial Intelligence
IHuawei ikhona kakhulu e-IFA 2017, ebanjelwe eBerlin kwezi ntsuku kwaye ngomso izakuvela kwindawo yokuqala, kwaye siyoyika ukuba ayizukuba yeyokugqibela, ukwazisa ngokusesikweni iprosesa entsha Kirin 970. Le chip intsha ayizukubhengezwa ngaphezulu nangaphantsi kukaRichard Yun, u-CEO womenzi wase-China.
Okwangoku asizazi iinkcukacha ezininzi ngale Kirin 970 intsha, kodwa ngokucacileyo kwiipowusta zentengiso ezibekwe kwisixeko saseJamani Siza kuba phambi kweprosesa yokuqala yezixhobo eziphathwayo kunye neyunithi yeArtificial Intelligenceyintoni efanayo kunye neyunithi yokuqhubekeka kwenethiwekhi.
Enkosi kule yunithi, iya kubonelela ngokusebenza Amaxesha angama-25 aphezulu kwimisebenzi yobukrelekrele bokuzenzela kunayo nayiphi na enye, ukuqondwa komfanekiso ngokuzenzekelayo okanye imisebenzi yokunxibelelana nelizwi inokwenziwa. Mhlawumbi le processor, ikunye neyunithi ye-AI, ziindaba ezimnandi esinokuzibona kwiziphelo zeHuawei ezilandelayo.
Ngokwimiba yobuchwephesha, le Kirin 970 iya kuba nefayile ye- I-CPU esibhozo-esisiseko, enye ye-12-core GPU, i-ISP ezimbini, kunye neLTE Cat enye. Ukongeza, ngokutsho kwamarhe, kubonakala ngathi iyakuba ne-Cortex-A73 cores kwi-2.4GHz kunye ne-Cortex-A53 cores kwi-1.8GHz, nangona kuya kufuneka silinde ngomso ukuze sikuqinisekise.
Into engathandabuzekiyo kukuba le Kirin 970 iya kuba yenye yeeprosesa ezigqwesileyo kwintengiso kwaye izixhobo ezizihambisayo ezibandakanya ngaphakathi ngokungathandabuzekiyo ziya kuba zezona zinamandla esinokuzifumana.
Ngaba ucinga ukuba uHuawei uza kubhengeza iKirin 970 entsha kunye neselfowuni?.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-Kirin 970, iprosesa yokuqala eneyunithi yeArtificial Intelligence
Wiko VIEW, uluhlu lokungena kunye nescreen esingenasiphelo
IMotorola inikezela ngemodeli yayo entsha ekumgangatho ophakathi, iMoto X4